ह्याप्पी बर्थ डे जिग्री - सेलिब्रेटी - साप्ताहिक
ह्याप्पी बर्थ डे जिग्री
- प्रकाश रानाभाट
कुमार कट्टेल ऊर्फ ‘जिग्री’ हास्य टेलिश्रृंखला भद्रगोलका कलाकार हुन् । वि.सं. २०४६ सालमा सोलुखुम्बुमा जन्मिएका कट्टेल आउँदो शनिबारदेखि ३० वर्ष लाग्दैछन् । कलाकारिताको क्षेत्रमा दाजु सीताराम कट्टेल ‘धुर्मुस’ ले प्रवेश गराएका जिग्री आज हास्य क्षेत्रमा स्थापित भैसकेका छन् । मेरी बास्सैबाट हास्य क्षेत्रमा आएका जिग्री सिस्नो पानी झ्याम्मै हुँदै भद्रगोलसम्म आइपुग्दा लेखक/निर्देशकसम्मको भूमिका निर्वाह गर्न पनि सफल भैसकेका छन् । उनको जन्मदिनको अवसरमा केही कलाकारहरुले यसरी शुभकामना दिएका छन् ।
कुमार एकदमै साधारण र सरल किसिमको छ । दायाँबायाँ लप्पनछप्पन त्यस्तो केही छैन । आफ्नै दुनिँयामा रमाउने अनि सितिमिति आफ्नो अडान नछोड्ने खालको छ । नयाँ–नयाँ सिर्जना गरिरहन रुचाउँछ । ऊ बाल्यकालदेखि नै पढाइमा अब्बल थियो । त्यो कुरा उसका सिर्जनाहरूमा पनि देख्न सकिन्छ । मलाई ऊ अभिनयमा भन्दा पनि उसका सिर्जनाहरूमा अझ बढी अब्बल लाग्छ । हास्यक्षेत्रमा मैले सुरुमा मेरी बास्सैमा जिग्री हजुरको क्यारेक्टरमा ल्याएको मान्छेले आज यति प्रगति गरेको हेर्न पाउँदा आनन्द लाग्छ, खुसी लाग्छ । मेरो प्यारो भाईले अझ धेरै प्रगति गर्दै जाओस् । नेपाल र नेपाली समाजमा योगदान पुर्‍याउने कामलाई निरन्तरता प्रदान गरोस् । जन्मदिनको धेरै–धेरै शुभकामना ।
सिताराम कट्टेल /हास्य कलाकार
सर्वप्रथम त जिग्री ब्रोलाई जन्मदिनको धेरै–धेरै शुभकामना । प्रत्येक वर्ष जन्मदिन आउँदा पहिलेको वर्ष भन्दा यो वर्ष अझै धेरै प्रगति होस् भन्ने कामना त एउटा सहकर्मीको नाताले गर्थे नै तर यस पटक भने अलि धेरै आशासहित थप कुराको पनि कामना गरेको छु । प्रत्येक वर्षले मानिसलाई बुढो बनाउँदै लाने हो । यतिका वर्षसम्म आइपुग्दा अब तपाई पक्कै पनि कलिलै हुनुहुन्न त्यसैले यो वर्ष जिग्रीको बिहे खान पाइयोस् अनि छिट्टै सन्तानको बाउ भएको पनि हेर्ने रहर छ । पोहोरको तुलनामा यो वर्ष अझ खास होस, विशेष होस् ।
अर्जुन घिमिरे /हास्य कलाकार
जिग्रीलाई जन्मदिनको उपलक्ष्यमा हैटका तर्फबाट बेस्सरी शुभकामना । यो प्रगतिलाई कायम राख्दै अझै उत्तरोत्तर प्रगति होस् । उहाँले हास्यक्षेत्रमा ल्याउनुभएको आयाम रोचक किसिमको छ । हास्यक्षेत्रमा एउटा युवाले पुर्‍याएको योगदान प्रशंसायोग्य छ । हिजोका दिन जसरी नै आगामी दिनहरूमा पनि आफ्नो क्षेत्रमा अझै नयाँ–नयाँ काम गर्दै जानुहोला ।
बुद्धि तामाङ /हास्य कलाकार
हामी मात्र १ दिनको जेठा कान्छा रहेछौ । साउन ४ गते जिग्रीको अनि ५ गते मेरो जन्मदिन भएकाले हामी दुवै जनालाई शुभकामना एवं बधाई भन्न चाहन्छु । युवाहरूको नेतृत्व गर्दै समाजमा भएका र घट्ने सामाजिक घटना, कुरीति एवं बेथितिमा जिग्रीले गरेको व्यंग्य बेजोड छ । यस्ता कामहरू अझै गरिरहनु । मलाई उहाँसँग पनि काम गर्ने इच्छा भएकाले त्यो इच्छा पनि यही वर्ष पूरा होस् । जिग्री ब्रोको सुस्वास्थ्य एवं दीर्घायुको शुभकामनाका साथ व्यस्तता निरन्तर कायम रहोस् भन्ने कामना ।
पुष्प खड्का/ अभिनेता
प्रकाशित :श्रावण ४, २०७६
सुशिला पाठकको ह्याप्पी होली
ट्रेन्डिङ १ भद्रगोलको कब्जामा
ह्याप्पी वर्थ डे रजनीकान्त
ह्याप्पी गाईजात्रा !
गाला जोडिएका सेल्फीहरू सबै चट्क श्रावण १७, २०७६